KHAJAARKA QASHINKA AH: SHARAXAADA NOOCYADA UGU FIICAN - BEER CAGAARAN
Bannaanka iyo beeraha waayo-aragnimo leh ee abuuray qajaarka dhowr sano ayaa hubaal ah in la ogaado qajaarka.
Magaca kooxda noocyada kala duwan ayaa u muuqday maaddada ugu muhiimsan ee qajaarka.
Muuqaalkani waa awoodda dhirta si ay u sameeyaan hal meel oo ka badan hal ama laba qanjidhar isku mar.
Marka ay tarmayaan noocyo kala duwan iyo bacrimiyayaasha, waxay jilciyayaashu sameeyaan dadaal badan si ay u xaqiijiyaan duurka iyagoo ka hor imanaya saameynta cudurada qajaarka kala duwan.
Tirada ugxan-ku-jirtu waxay si toos ah ugu xiran tahay dhowr arrimood, kuwaas oo ku saabsan xaaladaha sii kordhaya ee dhirta, qaddarka iftiinka qorraxda, meesha beerashada (aqalka dhirta lagu koriyo ama ciidda), iyo sidoo kale xaaladda guud ee dhirta.
Waxa ugu muhiimsan waa in noocyada kooxdani ay si degdeg ah u helayaan caan ka mid ah beerta.
Taas awgeed, waxaa suurtagal ah in lagu barto sida ugu macquulsan dabeecadaha kala duwan ee nooc kasta oo shakhsi ah ama midabka.
Kala duwanaan "Blizzard"
Recently dhow dhirta 'parthenocarpic' ka soo gooyay. Ripens si dhakhso ah, miraha waxaa laga saari karaa duurka ka dib 37 - 38 maalmood ka dib caleemaha ugu horeeya ee geedo.
Dhirta ayaa u muuqda inay ahaato mid daciif ah, dherer dherer ah, caleemaha dhinaca soo baxa waxay u koraan si aad u liita, qaybta hoose ee duurka iyagoo aan muuqan. Nooca ubaxa dumarka. Mid ka mid ah ugxan-yar 4 - 5 foomka miraha. Miraha waa yar yihiin, 6 - 8 cm oo dherer ah, 60 - 68 g miisaanka, qaabka loo yaqaan 'eliptical in shape.
Dusha sare ayaa lagu daboolaa tubercles waaweyn, joonisku wuxuu leeyahay bunni, iyo maqaarka laftiisu waa cagaar madow leh jilicsan jaale ah. Kala duwanaantu wax saameyn ah kuma yeeshaan jeexjeexyada xaadirka ah iyo kuwa hooseeya.
Dhadhanka midhaha waa mid aad u wanaagsan, mana aha wax khasaaro marka caanaha ama wax soo saarka. Wax-soo-saarka ayaa sareeya, 15.5 kg mitir labajibbaaran. mitir laba jibbaaran.
Xaaladaha gobollada leh jawi cakiran, waa wax aan macquul ahayn in lagu beero si toos ah ciidda, maxaa yeelay waxay si fudud u joojin doonaan. Haddii aaggu koonfurta, markaa waxaad ka boodi kartaa marxaladda geedo sii kordhaysa guriga.
Beeridda beereed waa in la sameeyaa horraantii Abriil, iyo haddii aysan jirin geedo, ka dibna habkan waxaa la samayn karaa ka dib qeybtii hore ee May. Halabuurka ee ciidda iyo heerkulka hawadu waa in ay sare u qaadaan biqilka abuurka.
Dib u soo celinta geedo waxaa la samayn karaa badhka hore ee bisha May ilaa qeybtii hore ee Juun. Tan iyo inta boqolkiiba of parthenocarpy ay u dhigantaa 100%, markaa ma aad ka welweli kartid goobta beerashada, tan iyo miraha kiis kasta ayaa la sameyn doonaa.
Waa lagama maarmaan in geedo prikopat halkii si aan caadi ahayn, sameynta u dhexeeya dhirta ugu yaraan 40 cm.
Ma jiraan farqi gaar ah oo ku saabsan daryeelka duurka iyo daryeelka ee dhammaan noocyo kale oo qajaar ah. Waxaa muhiim ah in si joogto ah biyaha loo dhajiyo dhirta, oo keliya biyo diirran oo degay.
Khubarada waxay kugula talinayaan adigoo isticmaalaya habka trellis ee koritaanka geedaha. Nidaamka waajibka ah waa la gooyaa caleemaha lateral. Marka codsanaya Bacriminta waxay u baahan yihiin inay buuxiyaan la'aanta dhammaan qaybaha raadadka.
Kala duwanaanshaha "Detinets"
Geedka hore u bislaaday - parthenkarpik. Dhaqdhaqaaqa farsamo ee miraha waxay ku dhacdaa 40 - 45 maalmood ka dib soo bixitaanka geedo. Qodobbada aan caddayn, oo leh celcelis xoog leh ee kobaca, laanta sidoo kale dhexdhexaad ah.
Sida nooca ubax, inta badan waa haween. In sinuska mid ka mid ah caleen wuxuu sameyn karaa ilaa 5 ugxan. Miraha waa dhexdhexaad dhexdhexaad ah (10-12 cm), cylindrical qaab, cagaaran midabka leh qadar yar oo jilicsan jaalaha ah.
Duufku wuxuu leeyahay tubercles yar, cufnaanta qalqaalinimada waa mid dhexdhexaad ah, barbaarinta midabka midabka fudud ee yar yar waa mid yar. Celceliska miisaanka qajaarka waa 90 - 120 g.
Dhadhanka miraha waa mid aad u fiican. Dhalidda sare, 14.5 kg halkii mitir labajibbaaran. mitir Kala duwanaanshahan waa difaac adag oo claasosporia ah. Kala duwanaantan waxay ka duwan tahay qajaarka haray ee soo haray in duurka u leeyihiin abuurista goosashada hore ee dhammaan noodbadaha marka laga reebo ugu horeysay. Hal xabbo oo caleen ah waxay samaysan kartaa 2 - 5 miro.
Waxaad u baahan tahay inaad bilowdo sii kordhaya duurka this geedo. Beeridda abuurka ayaa la samayn karaa waqti aan ka badnayn badhtamaha bisha Abriil, marka ay jirto iftiin ku filan meesha ay geedo yihiin, oo heerkulku aad u sarreeyo (20 - 23 ̊С).
Waxaa muhiim ah in geedo ayaa si fiican loo xoojiyey by waqtiga transplantation dhulka, haddii kale duurka u dhiman doonaa. Si ay duurka ku filan si ay u koraan, waxaad u baahan tahay biyaha si joogto ah iyo bacrimiya geedo. Diidmada waa inaysan aheyn mid aan macquul ahayn. Daadinta geedo waxay noqon kartaa marka uu dhaxan yahay.
Si dhirta si ay midho u dhasho, waxaa lagama maarmaan ah in ay si joogto ah u ilaaliyaan dheelitirka biyaha ee ciidda, si loo dabciyo iyo mulch dhulka, iyo si bacriminta si joogto ah.
Buundooyinka noocyada kala duwan ayaa sidoo kale lagu kori karaa taageero si loo fududeeyo geedi socodka beeraha. Waxaan sidoo kale u baahanahay inaan si joogta ah uga soo saarno haramaha, iyo sidoo kale samaynta daweyn ka hortag ah fungicides ka dhanka ah cudurada qajaar.
U kala saar "wiilka farta"
Partenokarpik. Midabka hore u bislaaday - dhererka farsamo ee miraha yimaado 37 - 39 maalmood ka dib geedo kor u kacay. Nooca ubaxa dumarka. Buundadu waa awood, branching waa ka sarreeya celcelis ahaan. 3 - 6 ugxan-yari ayaa lagu sameeyay hal dhinac.
Miraha dhererka dhexdhexaad ah (8-10 cm), cagaaran dhalaalaya, leh tubercles waaweyn iyo tiro badan oo qodxan cad. Dhadhaminta iyo tayada miraha cusub iyo kuwa la warshadeeyay waa kuwo aad u fiican. Noocyada noocyada kala duwan waxay u baahan yihiin nalal wanaagsan.
Kala sooc oo aan saameyn ku lahayn caarada runta ah iyo kuwa liita, xayawaanka olivka iyo fayruuska qajaarka. Tirada beergooyska ka soo jeeda 1 jibbaaran. m. waa 10-12 kg.
Waxay noqon doontaa mid weyn si ay u koraan dal kasta - iyo in lagu koriyo, iyo berrin bannaan. Si loo beero abuurka loogu talagalay geedo waa in la sameeyaa qeybta hore ee bisha Abriil. Qalabaynta dhulka ayaa la samayn karaa laga bilaabo dhammaadka May. Haddii geedo lagu dhex daro aqalka dhirta lagu koriyo, waad sameyn kartaa beer hore. Daryeelka geedo caadi ah.
Cufnaanta beerto ee aqalka dhirta lagu koriyo waa 2 - 3 geedo 1 dabaq ah. m, iyo dhulka u furan - 3-4 baadiyaha. Goobta duurka waa in si fiican loo wargeliyaa.
Qeybaha daryeelka ayaa ah waraabinta, kaas oo ah in si joogto ah loo sameeyo, beerashada ciidda, si aanay u samaynin qolof adag, hirgelinta bacriminta kala duwan, iyo sidoo kale buufinta ka hortagga ee cudurada kala duwan. Biyaha duurka waxay u baahan yihiin biyo diiran, dabacsan ciidda isla markiiba ka dib waraabiyo, iyo quudinta waa suurad wacan in la isku daro waraabinta.
Kala sooc "sariiraha boqorka"
Gardarrada ayaa lagu sameyaa bees, bartamihii bartamihii (45 - 48 maalmood). Buundooyin xoog leh, caleemaha dhererka dhexdhexaad ah, caws ayaa la googooyaa shahaado dhexdhexaad ah.
Miraha waa qaabka cylindrical qaab, 9-11 cm dheer, 80-90 g miisaanka, daboolay tubercles waaweyn iyo spines cad. Jidhka ama miyuubku waa qadhaadh yahay, Laakiinse cimrigaagu waa wanaagsan yahay.
Waxaa jira jarrado fudud oo dusha sare ah, taas oo miraha miraha ka dhigaysa xitaa soo jiidasho leh. Waxaad isticmaali kartaa cagaarka noocyada kala duwan sida saladh, iyo caano iyo pickling.
Mid ka mid ah laabta caleenta waxaa la sameeyaa in ka badan 5 ugxan-yari. Isugeynta celceliska, 5, 3 - 6.2 s. mitir Waxyaabaha kala duwan ayaa ka sii daraya jawiga cimilada oo aan saameyn ku lahayn caarada budada ah.
Beeridda abuurka ah ee geedo laga samayn karaa laga bilaabo bilawg May. Daadinta geedo waxay noqon kartaa bil iyo badh kadib, marka ay horey u sameeyeen 2 ilaa 3 caleemo. Haddii aad go'aansato in aadan korin geedo, ka dibna dhigista abuurka ah laga samayn karaa laga bilaabo dhammaadka May. Nidaamka degitaanka - 40x40 cm.
Maadaama ay kala duwan yihiin aan qabin xaaladaha cimilada, ma jiraan wax khaas ah oo ku saabsan daryeelka ee duurka this. Waa ku filan inaad si habboon u biyo qabatid dhirta, waxayna u adkeysan karaan yar yar ee geedi socodkan.
Tilmaamaha ugu horreeya ee la'aanta qoyaanku waa daciifinta lafdhabarta caleemaha, ka dibna waa inaad biyaha u daadisaa qadar ku filan biyo diirran. Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad fuliso dhammaan hawlaha kale ee daryeelka duurka qajaar.
Waxaa sidoo kale xiiso leh in laga akhriyo ku saabsan noocyada is-pollinated noocyo qajaarka.
U kala saar "Master"
Hybrid - nooca kornishonnogo parthenokarpik nooca nooc ka mid ah ubax. Hore (40 - 45 maalmood). Buundooyinka dareenka si degan oo isbeddel ah heerkulka, iyo sidoo kale la'aanta qoyaanka hawada iyo carrada. Qaar badan oo caleemaha gaaban oo gaaban ayaa la sameeyaa dhirta, sidaas darteed branching waa xaddidan ee duurka.
Hal kabar ayaa laga sameeyay 2 ilaa 6 ugxan. Miraha dhererka dhexdhexaad ah (10 - 12 cm), miisaanka 80 - 110 g, elliptical, cufan ee dhismaha. Duufku waa la jilciyay tubercles iyo qodax cad, madow cagaaran.
Hilibka qajaarkan waa qajaar, aad u dhadhan fiican leh, oo leh caraf udgoon. Xataa jilicsan iyo qabad Ilaah u barwaaqooba. Xayawaanku waxay u dhali waayaan miraha wakhti dheer, ma ayan saameynin jiritaanka saytuunka, qajaarka iyo qajaarka caarada. Laakiin dhirta ayaa waxyeello u geysan kara wax-qabad la'aan.
Geedo koraya ayaa laga boodi karaa, laakiin kaliya haddii cimiladu ay tahay mid sahlan. Xaaladdan oo kale, beereedka miraha waxaa la samayn karaa laga bilaabo bartamihii April ilaa badhtamaha June. Haddii la go'aamiyo in ay koraan geedo, ka dibna beerashada abuurka waxaa la samayn karaa laga bilaabo horraantii Abriil ilaa horraantii May.
Dhirta yaryar waxaa loo wareejin karaa dhulka ilaa bilowgii Juun, iyo geedo lagu dari karaa aqalka dhirta lagu koriyo xitaa horaantii. Cabbitaanka beerto waa caadi.
Kala duwan waa mid aan qabyo ahayn ee daryeelka, sidaa daraadeed geeddi-socodka sii kordhaya duurka this ma noqon doonaa waqti qaadashada. Waxaad u baahan tahay inaad si joogto ah biyaha ugu dhajiso dhirta, bacriminta, qanjaruufo, waxaadna xitaa ku xiran kartaa trellis ama xarigga fiilooyinka u dhexeeya dhufashada.
Kala duwanaan "Robin Hood"
Partenocarpic hybrid ah Bisaylkiisa hore. Xoortay geedaha sredneroslye, branching daciif, nooc ka mid ah ubax dumar ah. Wareega 4 - 5 miro ayaa la sameeyay.
Miraha waa gaaban, kaliya 5-6 cm dheer, miisaankeedu yahay 50-55 g, qaab ah cylindrical, cagaaran. Duufku wuxuu ku daboolaa boobka madow iyo buruqyada, iyo sidoo kale jilbaha iftiinka.
Dhadhanka midhaha ayaa wanaagsan. Cuntada waa 6.5 kg halkii qayboodba. Duurka waa kuwo aan qabyo ahayn, oo aan saameyneynin maskaxaha qajaarka ah iyo xayrta maqaarka.
Midhaha kala duwan ee noocan ahi waxay u fiican yihiin caanaha, laakiin sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa cusub.
Waxaad bilaabi kartaa geedo, waxaadna ka boodi kartaa marxaladan. Waa muhiim inaad ilaaliso geedo si kasta oo suurtogal ah si ay dhirta xooggan u koraan ka dib. Abuuridda abuurka iyo geedo, iyo horeba dhulka waxaa lagu fuliyaa waqtiga caadiga ah.
Geedo ku-tallaalid sidoo kale waa qorshaha. Cowska caadiga ah ee caadiga ah - 3 - 4 geedo kasta oo 1 dabaq ah. m
Kala duwanaanshuhu waa mid aan qabyo ahayn, markaa si ammaan ah ayuu u adkeysan karaa isbeddel kasta oo ka mid ah habka waraabinta ama quudinta. Loosing iyo mulching waa in la sameeyaa isla markiiba ka dib markii waraabka, marka biyaha horeba si buuxda u nuugay.
duurka ee noocyada this waxaa la isticmaali karaa habka trellis sii kordhaya.
Kala sooc "Okhotny Ryad"
Beelaha hore u bislaaday, duurka waxay bilaabaan inay kala soocaan 37 - 40aad ka dib caleemaha. Gherkin parthenkarpik. Goosashada ugu horreysa waxay noqon doontaa tan ugu badan, tan iyo markii uu yahay parthenocarpy bilowga ugu sarreeya.
In ay duurka, nooca ubax waa dheddig ah, formation iyo horumarinta caleemaha lateral ku xiran tahay load ee iyaga: midhaha badan oo ku saabsan mid ka mid ah biqil, sida sii yaraaday. Miraha dhererka dhexdhexaadka ah (8 - 11 cm), qaababka cylindrical, oo leh tiro yar oo tubercles ah, dhinacyadoodu waxay leeyihiin xayawaanka cad.
Qajaaradu waxay dhadhanayaan dhadhanka wanaagsan labadaba cusub iyo qasacadaysan. Mid ka mid ah noodhuubyada ayaa qaabab badan samayn kara (laga bilaabo 2 ilaa 6). Dhirta iyo miraha kala duwan ee noocaan ah waxay u adkeysanayaan cudurrada qajaarka badankood, marka laga reebo xagta oo bararsan.
Waxaa lagama maarmaan ah in la dalbado habka seedling ee caleenta la hubo ee duurka, iyo ka dib - fruiting ay. Beeridda beereed waa in lagu sameeyaa ciid wanaagsan oo diirran xilliga bilowga ilaa bartamaha bisha Abriil. Waxaad dhali kartaa dalagyo si aad uga dhigto duurka si aad u raaxo leh.
Marka dhirta ay yeelan doonto caleen saddexaad ama afaraad, ka dibna waxaad ku dili kartaa dhulka. Waxyaabaha ugu muhiimsani waa in muddadaaan jiri lahayn baraf habeenimo ah.
Daryeelidda duurka waxay gebi ahaan la mid tahay daryeelka digaagga qajaarka guud ahaan. Waxaad u baahan tahay inaad biyo ku shubto oo aad daaqsato duurka, ka dibna waxay ku siin doonaan hadhuudh wanaagsan. Haddii dhirta ay leeyihiin tiro badan oo ah daaqsinka, iyo miraha ma foomka, ka dibna dariiqyada caleemaha dhexe waa in loo baahnaado in ay noqdaan.
Kala soocaan sariiraha qajaarka, "iyaga oo ku dhajiya" iyaga oo leh duurka qajaar qajaarka si aad u hesho dhalid dheeraad ah marka loo eego xilli hore.